Somaliland oo xirtay fanaan Soomaaliyeed - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSomaliland oo xirtay fanaan Soomaaliyeed
Somaliland oo xirtay fanaan Soomaaliyeed
July 3, 2016 Abdi Omar Bile Somalia, Somaliland 0
Fanaanka Soomaaliyed, Farxaan Xidig.
Hargeysa-(Puntland Mirror) Ciidamada amaanka maamulka Somaliland ayaa xiray fanaanka Soomaaliyeed, Farxan Xidig.
Sida wararka sheegayaan fanaanka ayaa laga qabtay magaalada Boorame kadibna waxaa loo gubiyay caasimada maamulka Somaliland, Hargeysa.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in fanaanka loo xiray arrimo la xiriira dhanka siyaasada.
Dhawaan ayuu Farxaan Xidig iclaamiyay inuu u sharaxanyahay xildhibaan katirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya doorashada dhacaysa sanadkan dabayaaqadiisa.
Bishii September 2015, ciidamada booliska Somaliland ayaa xabsiga dhigay kooxda Xidigaha Geeska oo lagu eedeeyay in ay masrax ka ruxeen calanka Soomaaliya.
Maamulka Hargeysa ayaa iclaamiyay inuu ka madax-banaanyahay Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1991 balse looma aqoonsan dal rasmi ah.
September 4, 2016 Ugu yaraan hal qof oo ku dhintay mudaharaad ka dhacay magaalada Laas-caanood
July 22, 2016 Puntland iyo Somaliland oo kala qaaday ciidamadoodii isku horfadhiyay gobolka Sanaag
Madaxweynaha dowlada Puntland oo kala diray golahii deegaanka Gaalkacyo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Labo nin oo baastoolad ku hubaysnaa ayaa galabta oo Arbaco ah ku dilay nabadoon degmada Wadajir ee Muqdisho. Nabadoon Hilowle Xaafow oo kamid ahaa nabadoona dhaqanka oo si weyn looga yaqaanay magaalada Muqdisho [...]
Somali military officers say at least four soldiers and a photographer embedded with the army were killed in an attack by Islamic extremists on an army base in the town of Awdhegle, southwest of the [...]